Sida loo fuliyo maalin kasta dhiirrigelin muuqaal ah ama si fudud tartan rasmi ah si wax ku ool ah? La socoshada dhamaan wararka mowduucyada badan waxay noqoneysaa waqti aad iyo aad u badan waqti lumiskeena. Si aan kuu suurta geliyo waqti ku kaydi shaqadaada maalinlaha ah, Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad xiisayso adeegga NetVibes.
NetVibes waxaa la bilaabay dhowr sano ka hor, laakiin adeeggan ayaa is beddelay xoogaa waqti kadib. Fursada ah in (dib) loo ogaado mahadsanid tan barashada fiidiyowga !
Casharro bilaash ah: Korjoogteynta NetVibes
Casharkaan bilaashka ah, waxaad ku baran doontaa:
Si aad u isticmaasho Netvibes Samee saacad tayo leh Qaabeynta arjiga
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, dabcan waxaan kuugu jiraa gacantaada adoo adeegsanaya qaybaha is caawinta et FAQ
Soo helitaan wanaagsan Netvibes ...
La soco NetVibes Diisambar 28, 2020Tranquillus
horeBilaash: Sida loo abuuro iskaashi wax soo saar maqal iyo muuqaal ah